The Voice ဂျာနယ်နဲ့ ဗိုဟ်ချုပ်ဂွမ်မော် အင်တာဗျူး | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
The Voice ဂျာနယ်နဲ့ ဗိုဟ်ချုပ်ဂွမ်မော် အင်တာဗျူး
Soe Htut shared ခွန် ဒီးယမ်‘s photo.
The Voice ဂျာနယ်နဲ့ ဗိုဟ်ချုပ်ဂွမ်မော် အင်တာဗျူး(1-11-2012)
GMM : ကေအိုင်အို အနေနဲ့က အပစ် အခတ် ရပ်စဲရေး တစ်ခုတည်း မပြောဘူး။ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမယ် ဆိုတဲ့ ကတိကို ရချင်တာ။ ကတိမရဘဲနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဘာလုပ်မလဲ။ ပြန်ပစ်ကြမှာပဲ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်မယ့် ကတိတော့ မလိုချင်ဘူး။ ဆွေးနွေး မယ်ဆိုတဲ့ ကတိ မရဘူး။ ၂၀၀၈ ထဲ ဝင်လာပါ ပြောတယ်။ ဒါဆိုရင် ဆက်သွားလို့ မရတော့ဘူး။ သမ္မတရဲ့ ပထမဆုံး မိန့်ခွန်းမှာလည်း တခြား အဖွဲ့အစည်း တွေကို ရည်ညွှန်း ပြောတာပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေကို ရည်ညွှန်း ပြောတာ မပါ ဘူး။ ဒါကြောင့် အစိုးရက တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဘယ်လို သဘောထားသလဲ။ သောင်းကျန်းသူ၊ အခွင့်အရေး တောင်းသူလို့ သဘောထား လား။ ကျနော်တို့ကို သောင်းကျန်းသူလို့ သတ်မှတ်ရင် သောင်းကျန်းသူ အနေနဲ့ပဲ ဦးသိန်းစိန်က ဖြေရှင်းမှာပဲ။ နောက်တစ်ခုက ပင်လုံစာချုပ် အပေါ်မှာ ခုလက်ရှိ အစိုးရက ဘယ်လို သဘောထားလဲ မေးတာ ခုထိ အဖြေမရဘူး။ အတူတကွ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်လို့ရတဲ့ ဥပဒေ ပေါ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားရမယ်။ ခုသမ္မတ ပြောတဲ့ဟာ စာချုပ်ကို ကြည့် လေ။ ခုဟာက ယာယီ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးပဲ။ ဘာမှ တိတိကျကျ မရှိဘူး။ ရှမ်းနဲ့လည်း တိုက်ပွဲ ပြန်ဖြစ် တာပဲ။ ဒါကြောင့် အာမခံချက် မရှိဘဲ စာချုပ်ကြီး ချုပ်ပြီး နောက်ဖြစ်လာမယ့် စစ်ပွဲအတွက် ပြင်နေတာမျိုးနဲ့တော့ မရပ်ချင်ဘူး။
This entry was posted on January 4, 2013, in အင်တာဗျူး, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← လူစာရင်းလိမ်ခံရသဖြင့် မွတ်စလင်မ်များဒုက္ခသည်စခန်း ရိက္ခာပြတ်တော့မည်
အမေ့ခံလို့ မရတဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်တို့၏ ပုံရိပ်များ →